Alarobia, Oktobra 28, 2020 Alarobia, Martsa 24, 2021 Tom Siani
Androany ireo sehatra media sosialy dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainantsika. Olona an'arivony tapitrisa eran'izao tontolo izao no mampiasa azy ireo hifampiresaka, hiala voly, hifaneraserana, hiditra amin'ny vaovao, hikarohana vokatra / serivisy, fivarotana sns. Tsy zava-dehibe ny taonanao na ny fiavianao. Ny tambajotra sosialy dia hisy fiantraikany betsaka amin'ny fanaonao isan'andro. Azonao atao ny manatona olona manana fahalianana mitovy aminao ary manangana finamanana maharitra na dia tsy fantatra anarana aza. Azonao atao ny mangoraka olona maro hafa